सुशान्तको मृ’त्युको विषयलाई लिएर सलमानले पहिलोपटक मुख खोल्दै यस्तो भने ! – Jagaran Nepal
सुशान्तको मृ’त्युको विषयलाई लिएर सलमानले पहिलोपटक मुख खोल्दै यस्तो भने !
ट्वीटरमार्फत सलमानले लेखेका छन्, ‘म आफ्ना सबै फ्यानसँग अनुरोध गर्छु कि तपाईहरु सुशान्तका फ्यानलाई साथ दिनुस्। उनीहरुको भाषा र लाल्छनाप्रति ध्यान नदिनुस्। बल्कि यसको पछाडिको भावना हेर्नुस्। कृपया सुशान्तको परिवारलाई सहयोग गर्नुस्। परिवार र फ्यान्ससँग उभिनुस्। किनकि आफ्नालाई गुमा’उनुको पी’डा द’र्द’नाक हुन्छ।’
कतिले फलोअर्स घटाएका छन् । सोनाक्षी सिन्हाले ट्वीटर एकाउण्ट डिसेवल गरेकी छन् भने करण जौहरले इन्स्ट्राग्राममा सबैलाई अनफलो गरिदिएका छन् । उनको इन्स्ट्रामा ८ जनालाई मात्र फलो गरेका छन् । एजेन्सी